Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • Dad war samaynaya • dib u dhiska safarka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka
Farriinta Maalinta Shaqaalaha ee Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika
Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika Alain St.Ange: Qaaraddu waa inay ilaalisaa dhaqankeenna
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika » Farriinta Maalinta Shaqaalaha ee Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika
Adduunku looma sinna. Tan waxaa laga arkaa Afrika inteeda badan adduunka. Madaxweynaha Gudiga Dalxiiska Afrika Alain St. Ange wuxuu ka turjumayaa xaqiiqadan wuxuuna ugu baaqayaa daneeyayaasha inay arkaan xaqiiqda jirta.
Madaxweynaha Gudiga Dalxiiska Afrika, Alain St.Ange oo fadhigiisu yahay Seychelle, ayaa soo saaray bayaan 1 May, Maalinta Shaqaalaha.
St.Ange ayaa ogaatay saameynta COVID-19 ay ku leedahay xaalada shaqo ee Afrika.
Waqtiga ka jeedinta xaqiiqda dhabta ah ee dhulka ka jirta waxaa loo arki doonaa mid lagu bahdilayo dhammaan kuwa la ildaran aafada cudurka.
Maalinta Shaqaalaha 2021 waa inay noqotaa wakhti milicsiga qotoda dheer. Waxaan ognahay in Africa, iyo guud ahaan aduunka arintaas, ay sii wadaan burburka saameynta COVID-19 taas oo keentay shaqooyin culus. Awood la'aanta qoysaska inay shaqo helaan xilligan COVID waa inay ahaadaan kuwa safka hore kaga jira fekerkeena.
Maalinta Shaqaalaha Adduunka waa in sannadkan loo asteeyaa ka tarjumidda dhibaatada caafimaad ee adduunka ka jirta iyo dhibaatada ay dareemayaan kuwa ugu nugul.
COVID-19 meelna uma socdo dhowaan, iyo hirgelinta habab wax looga qabanayo si loo kiciyo adduunka ganacsiga isla mar ahaantaasna loo dheereeyo shabakad badbaado oo lagu hayo kuwa u baahan, waa inay noqdaan mudnaanta koowaad.
Waqtiga ka jeedinta xaqiiqda dhabta ah ee dhulka ka jirta waxaa loo arki doonaa mid lagu bahdilayo dhammaan kuwa la ildaran aafada.
The Guddiga Dalxiiska Afrika weli waxaa ka go'an inay u shaqeyso 54-ka dal ee ka dhigaya Afrika qaaradda weyn ee ay tahay. Wadajir ahaan, waxaan arki doonnaa iftiinka dhamaadka mugdiga godka COVID-19.
Maalinta Farxada leh 2021
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Guddiga Dalxiiska Afrika: www.africantourismboard.com